रिचा थापा र यशराजको 'लभ यु हमेशा' युट्युबमा (पुरा फिल्म) -FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फिल्मी फण्डा । नायक यशराज गराच र नायिका रिचा थापाको अभिनय रहेको फिल्म लभ यु हमेशा युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । लकडाउनको समयलाई लक्षित गरेर बुढासुब्बा डिजिटल प्रा.लि.ले फिल्म लभ यु हमेशालाई सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रेम जोडीको रुपमा देखिएका यशराज र रिचालाई रोमान्टिक मुडमा फिल्ममा देख्न सकिन्छ । हलमा राम्रो ब्यापार गर्न नसकेको लभ यु हमेशालाई लकडाउनको समय भएको कारण दर्शकले कतिको रुचाउने हो त्यो केही दिनमा थाहा हुनेछ ।
क्रियशन प्रा.लि. र तपश्या प्रोडक्शनमा निर्माण भएको फिल्मलाई भाष्कर प्रधानले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा यवान गुरुङ र मिलन गुरुङको संयुक्त लगानी रहेको छ ।
पुरा फिल्म :
तपाईले हेर्नु भयो यी नयाँ ८ फिल्म (पुरा फिल्म सहित)
फिल्मी फण्डा । यतिखेर कोभिड–१९ का कोरना भाइरसको जोखिमका कारण विश्वभरका नागरिकहरु क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । नेपालमा पनि लकडाउन शुरु भए लगतै सम्पूर्ण नागरिकहरु क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् ।
यो समयमा दिन बिताउन कतिपयलाई मुस्किल पनि हुने गर्दछ । कतिपयले दिन बिताएपनि केही न केही गरिरहेका छन् । अधिंकाशले यस बेला आफुलाई घरमै बसेर गर्न मन लागेका काम हरु गर्ने लगायत गरिरहेका छन् । कतिपयले फिल्म हेर्न रुचाउँछन् ।
क्वारेन्टाइनको समयमा फिल्म हेर्न लागि नयाँ ८ फिल्महरु सार्वजनिक भएका छन् । विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएको यी फिल्महरु तपाईले हेर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुनेछ । अर्थता तपाई हाम्रो अनलाईनको मुभि क्याटागोरीमा गएर मन लागेको फिल्महरु हेर्न सक्नुहुनेछ ।
फिल्म हेर्नको लागि फिल्मको नाममा क्लिक गर्नुहोस् ।
अरिका फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म अनुराग सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । ऋृषि धमला प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्मका निर्देशक सत्यराज चौलागाई हुन् । फिल्ममा एलिजा गौतम र समुन्द्र पण्डितको मूख्य भुमिका रहेको छ । फिल्मका निर्माता गीता भेटवाल र भरत गौतम हुन् ।
पोई पर्यो काले
फिल्म पोई पर्यो काले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । रेड बर्ड प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मका निर्देशक शिशिर राणा हुन् । फिल्ममा पुजा शर्मा, सौगात मल्ल, आकाश श्रेष्ठ, श्रृष्टि श्रेष्ठ, सोहित मानन्धर र सुरक्षा पन्त लगायतको मूख्य भुमिका रहेको छ । फिल्मका निर्माता दिपम मनाङ्गे र सरोज नेपाली हुन् । प्रस्तुतकर्तामा किरण नेपाली रहेका छन् ।
फिल्म प्रेम दिवस सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । रिल मोशन पिक्चर्स र सञ्जय न्यौपाने प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई योगेश घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा प्रियंका कार्की, आयुष्मान देशराज जोशी र विशाल खरेलको मूख्य भुमिका रहेको छ । फिल्मका निर्माता मनेश दाहाल हुन् ।
फिल्म सुश्री सम्पत्ति सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । रौल ईन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा रमेश त्वयना प्रस्तुतकर्ता निर्मित फिल्म सुश्री सम्पत्तिलाई संचारकर्मी सुव्रत आचार्यले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा सलोन बस्नेत, विनोद न्यौपाने र सारा श्रीपाइलीको मूख्य भुमिका रहेको छ । फिल्मका निर्माता विज्ञान राई, नुनम सुब्बा र रोमन शिलाकार हुन् ।
बिसि मोशन पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म द ब्रेकअप सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । हेमराज बिसी निर्दे्शित फिल्ममा आयुष्मान देशराज जोशी, शिल्पा मास्के र रेमन दास श्रेष्ठको मूख्य भुमिका रहेको छ । फिल्मका निर्माता रुपक थापा, दिपक खतिवडा, रेनु राणा र हेमराज बिसी स्वयम रहेका छन् ।
फिल्म नयाँ पिढि सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । बबिन्द्र तामाङले निर्देशन गरेको फिल्म नयाँ पिढिका निर्माता पासाङ लोप्चन र छिरिङ लामा हुन् । फिल्ममा श्रीदेव भट्टराई, अनु शाह र बिक्रम तामाङको मूख्य भुमिका रहेको छ ।
निर्माता सन्तोष सेनद्धारा निर्मित फिल्म ‘मेरी मामु’ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । आसुशेन फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई रामशरण पाठकले निर्देशन गरेका हुन् ।
फिल्ममा निर्माता सेनका छोरा आयुव मूख्य भुमिकामा छन् । विशेष त सन्तोष सेनले आफ्नै छोराको डेब्युका लागि फिल्म मेरी मामु निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा सारुख ताम्राकार, अश्लेसा ठकुरी र कुसुम गुरुङलगायतको भुमिका रहेको छ ।
फिल्म शत्रुगते सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा रिलिज भएको छ । मह संचारको प्रस्तुतीमा बनेको यस फिल्मलाई किरण केसीले निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा हरिबंश आचार्यको कथा, दीपकराज गिरी र प्रदीप भट्टराईको पटकथा, हरिवंश आचार्य र प्रदीप भट्टराईको संवाद रहेको छ ।
फिल्ममा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, दीपकराज गिरी, प्रियंका कार्की, आँचल शर्मा, पल शाह लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । फिल्मलाई प्रदिप भट्टराइले निर्देशन गरेका हुन् ।
अन्य धेरै फिल्महरु हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । सबै फिल्म
श्रमिकहरुको पीडा सर्ट फिल्म ‘मे वान’ मा